Angikwazi Ukuyeka Ukucabanga Ngocansi | Intsha
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Osset Isi-Ukraine Isi-Umbundu Isi-Urhobo IsiBemba IsiBhunu IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGreki IsiHausa IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikongo IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMalta IsiMoore IsiMyanmar IsiNdau IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Khetha abangane ngokuhlakanipha. Uma abangane bakho noma ofunda nabo beqala ukukhuluma ngokuziphatha kabi ngobulili, ukuhlanganyela kuleyo ngxoxo kuyokwenza kube nzima nakakhulu ukulawula imicabango yakho. Ngokuvamile ungayithola indlela yokushiya izingxoxo ezinjalo ngaphandle kokubonakala sengathi uzenza ngcono bese bekugcona.
Ungawavumela amagciwane ahlasele i-computer yakho? Pho kungani ufaka imicabango engcolile engqondweni yakho?
Balekela ezokuzijabulisa ezonakele. Ezokuzijabulisa eziningi namuhla zenzelwe ukuvusa izifiso zobulili ezingafanele. Sithini iseluleko seBhayibheli? “ Masizihlanze kukho konke ukungcola kwenyama nokomoya, siphelelisa ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu. ” (2 Korinte 7:1) Gwema ezokuzijabulisa ezivusa izifiso zobulili.
Khumbula lokhu: Izifiso zobulili azizimbi. Empeleni, uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane ukuba bakhangane futhi ukwanelisa isifiso sobulili kuyafaneleka emshadweni. Ngakho uma uba nezifiso zobulili ezinamandla, ungacabangi ukuthi umubi noma awusoze wakwazi ukuziphatha ngendlela ehlanzekile.
Iphuzu elisemqoka: Ungakhetha ukuthi ingqondo yakho igxila kuphi. Kokubili ukucabanga nokwenza kwakho kungaba msulwa uma ukhetha ukwenza kanjalo!